Letters toayoung poet by kyaw zaywint - issuu
ပပပပ ပပပပပပ ပပပပ ပပ ပပပပပ ပပပပပပပပပ ပပပပ ပပပပပ ပပပပပပပပပ ပပပပ ပပပပပ
ပပပ ပပပ ပပပပပပ ပပပပပပပပပပပ ပ
ပပပပပ ပပပပ ပပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပပ ပပပပပပ ပပပ ပပပပပပပ ပပပပ ပပပပပပ ပ ပပပပပ ပပပပပ.ပပပပ ပပပ ပပ.ပပပပပပပ ပပပပပပပပပပပပ ပပပပ ပပ.ပပပပ ပပပပပပပ ပပ.ပပပပပ ပပပပပ ပပပပ .ပပပပပ.ပပပ ပပပပပပ. ပပပပပပပပပပပပပ.ပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပ ပပပပပပ ပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပပ ပပ ပပပ ပပပပပပပပပပပပပပ.ပပပပပ ပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပ ပပပပပပပ.ပပပ ပပပ ပပပပပပပပပ ပပပ.ပပပပပ ပပပပပပပပပ ပပပပပ ပ ပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပပပပ ပပပ ပပပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပ ပပပပ ပပပပပပပပပ.ပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပ ပပပပပပပပ ပပပပ.ပပပပပပပပပ ပပပပ ပပပပပပပပပပပပပပ ပပပပ ပပပပ ပပပပပ.ပပပပပပပ ပပပပ ပပပပပ.ပပပပပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပ ပပပပပ ပပ.ပပပ ပပပပပပ ပပပပ ပပပ ပပပပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပ ပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပပပပ ပပပပ ပပပပပပပပပ.ပပပပပပပ ပပပပပ ပ.ပပပပပပပပပပပ ပပပပပ ပပပပ ပပပ.ပပ.ပပပပပပ ပပပပပပပပပပပပ ပပပပ ပပပပပပပပ ပပပပပ ပပပ ပပပပပပပ ပပပ ပပပပပပပ ပပ.ပပပပပပပပ ပပ.ပပပ ပပပပပပပပပပပ.ပ
ပပပပပပပပပပပပပပ.ပပပပပပပပပပ.ပပပပပ ပပပ ပပပပပပ.ပပပပပ ပပပပပပပပပ ပပပပပ ပပပပ ပပပပပ ပပပပ.ပပပပပပပပပပပပ
ပပပပ ပပပ ပပပပ.ပပပပပပပပ .ပပပပပ ပပပပပ ပပပ ပပပပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပပ`ပပ.ပပပပပပ ´ပပပပပ.ပပပပပ ပပပပပပပပပပပ ပပပပ ပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပ.ပပပပပ ပပပပပ ပပပ ပပပပပပပပ ပပပပ.ပပပ ပပပပပပပပပပပပပပပပပ.ပပပပပ .ပပပပပ ပပ ပပပပပ .ပပပပပပပပ ပပပပပပပပပပ ပပပပပ ပ ပပပပပ ပပပပပပပပပ ပပပပပပပ ပပပပ ပပပပ ပပ.`ပပပပပပပပပပပပ. ´ပပပပပပ ပ ပ ပပပပပပပ ပ ပပပပပပပပပ ပပပပ ပပ.ပပပပပပပပပ (ပပပပပပပပပ)ပပ.ပပပ ပပပ ပပပပ ပပ ပပပပ.ပပပပပပ ပ ပပပပပပပ .ပပပ ပပပပပပပပပပပပပပပ.ပပပပပပပပပ.ပပပပပပပပ ပပ ပပပပပပပပပပပပပပပပပ.ပပပပပပပပ ပပပ ပပပပပ ပပပပပပပ ပပပပပ ပပပပပပပပပပ.`ပပပပပပပပပပပပ.´ပပပပပပပ ပပပ.ပပပ ပပပပပ ပပပပ ပပပပပ ပပပ.ပပပပပပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပ .ပပပ ပပပပပ ပပပပပပပပပပပပ ပပပပ .ပပ.ပပပပပပ.ပပပ.ပပပပပပ ပပပပ ပပပပပပပပ ပပပပပပ.ပပပပပပ ပပပ.ပပပပပ ပပ.ပပပပပပပပ ပပပပ .ပပပ.ပပပပပပပပ ပပပပပပပပပပပ ပ ပပပ ပပပပပပ.ပပပပပပပပပပပပ ပပပ.ပပပပပပ.ပပပပပ ပပပ.ပပပပ ပပပပပ ပပပပ ပ ပပပပပ ပပပပ ပပပပပပ ပပပ ပပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပပ. ပပပပပပပပပ ပပပပပပ ပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပပပပ.ပပ.ပပပပပပပပပ ပပပ ပပပပပပပပပပပပပ.ပပပ ပပပပပပ ပပပပပ ပပပပပပပပပပပ ပပပ ပပပပ.ပပပ ပပပပပပပပပပပ ပပပပပ ပပပ ပပပ ပပပပပပပပ ပပပပပပပ ပပပ ပပ ပပပပ ပပပပပပပပပ ပပပ ပပပပပပပပပ.ပပပပပ ပပပပ .ပပ.ပပပပပပပပ ပပပပပပပပ ပပပပပ.ပပ ပပပ ပပပပပပ .ပပပပပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပပ ပပပ ပပပပပ ပ ပပ.ပပပပပပပပပပ ပပပ ပပပပပပပပ ပပပ ပပပ ပပပပ.ပပပပပ ပပပပပပပ .ပပပပပပပ
ပပပပပပပပပ ပပပပပပပပပ.ပပပပပပပ ပပပပ ပပပ .ပပပပပပပပပပ ပပပ ပပပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပပပပပ ပ ပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပ ပပပ ပပပပပပပပ ပပပပပပပပ ပပပပပ ပပပပပပ ပပပ ပပပပပပပပ ပပပ ပပပပပ ပပပပပပပပပပ ပ ပပပ ပပပပပပ.ပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပ ပပပ ပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပ.ပပ.ပပပပ ပပပပ.ပပပပပပပ ပပပပ ပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပပပပ.ပပပပ ပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပပ.ပပ.ပပပပပ ပပပ ပပပပ .ပပပပ ပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပ .ပပပ ပပပ ပပပပပပပပပပပပပပပပပ.ပပပပ ပပပ ပပပ ပပပ ပပပပပပပပပ.ပပပပပ ပပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပပ .ပပပပပ ပပပပပပ ပပပပပပ ပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပ.ပပပပပ ပပပပ ပပပပပ ပပပပပ ပပပပပပ´ပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပ ပပပ.ပပပပပပ´ပပပ. ပပပပပ .ပပပပပ ပပပပပပပပပ ပပပပပပ ပပ.ပပပပပပပ ပပပပပပပ ပပပပပ .ပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပ ပပပ.ပပပပပပပ ပပပပ ပပပပပပ ပပ.ပပပပပပပ ပပပပပပပပ ´ပပပပပပပပပ ပပပ.ပပပ ´ပပပပပ.ပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပ ပပပပပပပပ ပပပပ ပပ.ပပပပပပပပ ပပပ ပပပပပ ပပပပပပပပ ပပပပပပပ ပပပပပပပပပ .ပပပ ပပပပပပပပပပပပပပ ပပပ ပပပပပပပပပ ပပပပပပပပပ ပပပပပ ပပပပပပပပ ပပ.ပပပပပပ ပပပပပပ ပပပပပ ပပပပ.ပပပပ ပပပပ.ပပပ ပ ပပပပပပပပပပ ပပပပပပ ပပပပပပပ ပပပပပပပ ပပပပပပပပပပပပ ပပပ ´ပပပပ´ပပ.ပပပပပပပပပ ပပပ ပပပပပပပ ပပပ ပပပပပပပပပ ပပပပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပပပ ပပပ ပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပပ.ပပ ပပပပပပပပပပပပပပပပပ.ပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပပပ.ပ ပပပပ ပပပပ ပပပပပပပပပပပပပပပပပပပ ပပ.ပပပပပပပပပပပပပပပပပ
ပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပ ပပပပပ ပပပပပပပပ ပပ.ပပပပ ပပပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပ ပပပပပ ပပပပ ပပပ.ပပပပပပပပပပပပ ပပပပပ ပပပ ပပပပပ ပပပပပ ပပပပပပပပ ပပပ.ပပပပ ပပပပ .ပပပပ ပပပပပ ပပပပပ ပပပပ ပပပပပပပပ ပ ပပပပပပပပ .ပပပပပပပ ပပပပပပပပ.ပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပပ ပပပ ပပပပပပပပပ.ပပပပပပပပပပ.ပပပပပပပပ ပပပ ပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပပပပ.ပပပပပပပ ပပပပ ပပပပပပ ပပပပပပပပပပ.ပပပပပပပပပပ.ပပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပ ပပပပပ.ပပပပပပပ ပပပပ ပပပ ပပပပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပ ပပပပပပပပပ ပပပပပ ပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပ ပပပ ပပပ.ပပပပပ ပပပပပ .ပပပပပ ပပပပပပပ ပပပပ ပပ.ပပပပပပပပပ ပပပ ပပပပပ ပပပပပပပပ ပပပပ ပပပ ပပပပပပပပပပ ပပပပ ပပပပ ပပပပ ပပပပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပပပ ပပပ ပပပပပပ.ပပ.ပပပ ပပပပပပပပပပ ပပပပ ပပပပ ပပပ.ပပပပပပပပပ ပပပ ပပပ ပပပ ပပပ. ပပပပပ .ပပပပပ ပပပပပပပပပပ ပပပ ပပပ ပပပပပပပပပပ.ပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပပပပပ ပပပ ပပ ပပ.ပပပပပပပပပပ ပပပပပ ပပပပပ ပပပပပပပပပ.ပပပပပပပ .ပပပပပ ပပ ပပပပ ပပပပပပပ ပပပ ပပပပပပပ ပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပပ ပပပပပပ ပပပပပ ပပပ ပပပ.ပပပပပ ပပပပပ ပပပပပ ပပပပပ ပပပပ.ပပ.ပပ.ပ ပပပပပပပပပပပပပ.ပပပပပပပပပပပပပပပပ.ပပပပပ ပပပ ပပပပပပပပပ ပပပပပပပ ပပပပပ ပပပပပပပပ.ပ ပပပပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပပ.ပပပ ပပပပပပပပပပပပ ပပပပပ ပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပပပ ပပပပပပ.ပပပပပပပ ပပပပပ ပပပပပ ပပပပပ ပပပပပပ.ပပပပပပပ ပပပပပပပ ပပပပပပပပ ပပပ.ပပပပ.ပပပပပ ပပပပပ ပပပပပ.ပပ.ပပပပပပပပ ပပပ ပပပပပပပပပပပပပပပပပပပ ပပပပ .ပပပ
ပပပပပ ပပပပပပပပ.ပပပပပ ပပပပပပပပ ပပပပပ ပပပပ.ပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပပ ပပပပပ ပပပပပ ပပပပပပပပပပပ ပပပ ပပပပပပ.ပပပပပ ပပပ ပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပ ပပပပပပပပ .ပပပ ပ ပပပ ပပပပပပ.ပပပ ပပပပပ ပပပ ပပပပပပပပ ပပပပ ပပပပပပပ ပပပပ .ပပပပပပပ ပပ ပပပ ပပပပပ ပပ.ပပပပပပပပပပပပ ပပပပပ ပပပပပပပ ပပပပပ ပပပပပပပပ ပပပပပပပ ပပ.ပပပပပပပ ပပပပပပပပပပပ .ပပပ ပ ပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပ ပပပပ .ပပပပ ပပပ.ပပပပပ ပပပပပ ပပပပပ ပပပပပ ပပပပပ ပပပပပပပ ပပပပ ပပပပပပပပပပပ `ပပပပ .ပပပပ ´ပပပပပပပ ပပပပပပပပပပ ပပပပပ ပ ပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပပ.ပပပ ပပပပပ ပပပပပ ပပပပပပပပပပပ ပပပပပပ ပပပပပပပ ပပပပပပပပ ပပပပပပပပ ပပပ.ပပပပ ပပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပပပပ ပပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပ ပပပ.ပပပပ ပပပပပပပ ပပပပပ.ပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပပ.ပပပ ပပပပပပ.ပ ပပပ ပပပပပပပ.ပပပပပပပပပပပပ ပပပပပ ပပပပပ ပပပပပပပ ပပပ ပပပပပပပပ.ပပပ ပပပပ ပပပ ပပပပပ ပပ ပပပပ.ပပပပပပပပ ပပပပပပ ပပပပပ.ပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပ.ပပပပပပ ပပပပ ပပပပပ ပပပပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပ ပပပပ ပပပပပပပ ပပပပ ပပပပပ ပပပပပ ပပပပပ ပပပပပ ပ ပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပပ ပပပ.ပပပပပ ပပပပပပပပ ပ ပပ .ပပပ ပ ပပပပပပပပ .ပပပပပ ပပပပ .ပပပပပ.ပပပပပပ ပပပပပပပပ ပပပ ပပပပပပပပ ပပပပ ပပပပပပပပ ပပပပပ ပ ပပပပပ .ပပပပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပ.ပပပပပပ ပပပပပပ ပပပပပ ပ ပပပပပ ပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပပပပပ ပပပပ `ပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပ ပပပပပပ ´ပပပပပ.ပပပပပပပ ပပပ.ပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပ ပပပပပပပပပပ ပပပပပပပ ပပပပပ ပပပပပပပ ပပပ
ပပပ ပပပပပ ပပပပပ ပပပပပပပ`ပပပပပပပပပပ ပပပ.ပပပ ပပပပ ပပပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပပ .ပပပ ပ ပပပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပ.ပပပပပပပပ ပပပပပပပပပပပ ပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပပပပ`ပပပပပပပပပ ´ပပပပ.ပပပပပပပပ ပပပပ.ပပပ ပပပပ ပပပ ပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပ.ပ ပပပပပပပပပပပ ပပပ ပပပပပပပ ပပပ ပပပ ပပပပပပပပ ပပပပပ ပပပပပ ပပပပပပပ ပပပပပ ပပပပ.ပပ.ပပပပပပပပ ပပ ပပပပပပပပပ ပပပပပ ပပ.ပပ.ပပ.ပပပ ပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပ.ပပ ပပပပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပ ပပပ.ပပပ ပပ ပပပပပပပ .ပပပပပပပပပပ .ပပပပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပပပပပ ပ ပပပပပပ ပပပ ပပပပပပပပပပပပပ.ပပပပပ ပပပပပပ ပပပပပပပပပ.ပပပပ ပပပပပပပ ပပပပ ပပ.ပပပပပပပပပပ .ပပပပ ပပပပပ ပပပပပ .ပပပပ ပပပပပပပ .ပ ပပ ပ ပပပပပ ပပပပ ပပပပပပ.ပပပပပပပပပ ပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပပပပ ပပ ပပ ပပပပပပပ ပပပ ပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပ ပပပပ ပပပပပပပပပပ .ပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပပပပပပပ ပပ.ပပပပပ ပပပပပပပပ.ပပပပပ ပပပပပပ ပပပ ပပပပပပပပပ.ပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပ .ပပပ ပပပပပပပ.ပပပ ပပ ပပပပပပပပပ ပပပပပ ပပပပ ပပပပ .ပပ.ပပပပပပပပပပပ ပပပပပ ပပပပပပ ပပပပပပပပပပပ ပပပပ ပပပပပပပပပပပ ပပပပပ ပပပပပ.ပပပပပ ပပပပ .ပပ. ပပပပပပပပ ပပပပပ ပပပပ ပပပပပပပပပ ပပပပပပပပပ ပပပပပပပပပပပ ပပပပပ ပပပပ .ပပပပပ ပပပ.ပပပပပပပပပပ ပပပပပပ.ပပပပပပပပပ ပပ.ပပပ ပပပပပပပ ပ ပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပပပ ပပပ.ပပပ ပပပပပပ.ပပပ.ပပပပပပပပပပပ ပပပ ပပပ ပပပ ပပပပ ပပပပပ ပပပပပ.ပပပ ပပပ ပပပ .ပပပ ပပပပပပပ ပပပပပ ပပပပ ပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပပ ပပပပပပ.ပပပပ ပပပပပ ပပပပပပ
ပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပပ ပပပ .ပပပပပပပ ပပပပပပပပပ ပပပပပ ပပပပပပပ .ပပပပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပပပပပ .ပပပပပပ ပပပပပ ပပပပ ပပပပပပပပပပ ပပပပပ ပပ.ပပပ.ပပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပ ပပပပ ပပပ ပပပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပပပပပပ
ပပပ ပပပပပပ.ပပပပပပပပပပပပ ပပပ ပပပပပပပပပပ ပပ.ပပပပပ ပပပပပပ .ပပပပ. ပပပ ပပပပပပပပ ပ ပပပပ ပပပပပ ပပပပပပပပပပပပ.ပပပပ .ပပပပပ.ပပပ.ပပပပပပပပပပပပ ပပပပ ပပပပပ ပပပပပ ပပပ ပပပ ပပပပပပပပပပပပပပပပ ပ ပပ.ပပ.ပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပပပပပပ ပ ပပပပပပပပပပပပပပပပပပပ ပပပပ .ပပ.ပပပပပပပပပပပပပပပပ.ပပ ပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပ ပပပပ .ပပပပပပပပပ.ပပပပပ ပပပ ပပပပ ပပပပပပပပပ ပ
ပပပပပ ပပပပ .ပပပပပပပပပပပပပ ပပပပ ပပ.ပပပ.ပပပပပ ပပ.ပပပပပပပပ ပပပပပပ ပပပ.ပပပပပ ပပပပပ ပ ပပပ ပပပပပပ.ပပပပပပပ ပပပပပပ.ပပပပပပပပပ.ပပပပပပပ ပပပပပပပ ပပပ ပပပပပပပပပပပ ပပပပပ ပ ပပပပပပပပပ ပပပပပပပပပပ ပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပ ပပပပ ပပပပပ ပပပပပ.ပပပပပ ပပပပ ပပပပပ ပပပပ ပပပပပပပပပပ ပပပ ပပပပ ပပပပပပပပပပပပပ ပပပ ပပပပပ ပပပပ ပပပပပ ပပ.ပပပ ပပပ.ပပပ ပပပ ပပပပပပပပပ ပ ပပပ ပ ပပပ ပပပပ ပပပပ ပပပပ ပပ ပပပပပပ ပပပပပပပ